Manjaro 20.1.2 inosvika nemhinduro yeBleedingTooth | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 20.1.2 inosvika neNVIDIA 455 madhiraivha uye mhinduro yeBleedingTooth
Maawa mashoma apfuura zvakatangwa Manjaro 20.1.2. Ichi chiitiko chechipiri chekugadzirisa kwaMikah, uye panguva ino havana kuwedzera runyorwa rurefu rwezvinhu zvitsva. Icho chinhu chinoshamisika, uye zvakanyanya kufunga kuti ndaifunga kuti chichauya neiyo nyowani yePlasma (5.20). Kubva pakuonekwa kwayo, izvi hazvizove zvakadaro kusvika pakaburitswa OS v20.2.
Zvatinogona kusimbisa, nekuti nenzira iyi vakawedzera to the rondedzero yezvakakurumbira zvitsva, ndeyekuti ivo vakasanganisira maviri anonyanya kukosha. Chekutanga chavo ndechekuti ivo vaisanganisira vatyairi veNvidia 455. Chechipiri ndechekuti vakatogadzirisa kare kukundikana kwetsanga kwaizivikanwa se Kubuda ropa zino, saka izvozvi Manjaro yakachengeteka zvakanyanya, zvirinani kana tikakwira uye toshandisa imwe yakagadziridzwa vhezheni yekernel. Kunyangwe zvichizivikanwa kuti kumwe kugovera kwakawanda kwakatoburitsa chigamba chekugadzirisa iri dambudziko.
Pfungwa dzeManjaro 20.1.2
Vakagadzirisa tsanga dzavo. Manjaro 20.1.2 inoshandisa Linux 5.8.16 nekumisikidza, asi Linux 5.9.1 inogona kuiswa.
Firefox, Palemoon, uye Brave zvakagadziridzwa kune avo vazvino vhezheni.
Pamac 9.5.12. Pamac ndiyo GUI chishandiso chekuisa software, zvakasiyana nePacman. Ini ndinotaura pamusoro peizvi nekuti kune vanhu vanovakanganisa.
NVIDIA yakagadzirisa vatyairi vayo kusvika pa455.
Manjaro 20.1.2 ndiyo iyo vhezheni nhamba yavakaisa mukati iyo itsva ISO, nekuti iyo sisitimu yekushandisa inoshandisa iyo Rolling Release modhi yekuvandudza uye ese mapakeji nyowani atovepo kuti aiswe kubva kuPamac kana na sudo pacman -Syu yevashandisi varipo. Semazuva ese, yatove kuwanikwa mune hombe vhezheni, XFCE, uye mu KDE neGNOME, ese ari maviri mavhezheni ehurumende. Iyo nharaunda shanduro dzichagadziridzwa zvakare mumashure, pakati padzo isu zvakare tine shanduro neCinnamon, Budgie kana MATE desktops.
Iyo inotevera vhezheni vhezheni ichave yeManjaro 20.2, iine codename inotanga naN uye zuva rekuburitsa iro risati raziviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 20.1.2 inosvika neNVIDIA 455 madhiraivha uye mhinduro yeBleedingTooth
Firefox 82 inosvika ichivimbisa kukurumidza kumhanya uye idzi dzimwe nhau
Maitiro Ekutarisa Yakachengetedzwa Zvemukati (DRM) pane iyo Raspberry Pi, Vol. 2